साहसिक यात्रा « KhelkudNews.com
Published On :7August, 2014 6:58 pm
पागलपनको अर्थ के हो ? यो बहषको विषय हुन सक्छ । पागलपनको बारेमा धेरैको धेरै ब्याख्या छन् । कसैले सहज ब्याख्या गर्छन्, यदी टाउकाले टेकेर हिड्ने चलन भएको भए गोडाले टेकेर हिड्नेहरुलाई नै पागल भनीन्थ्यो । गोडाले टेकेर हिड्ने चलन राखेको छ समाजले । यसकारण कोही टाउकाले टेकेर हिड्यो भने त्यसलाइ पागल भनिन्छ । टाउकाले टेकेर नै सहज गन्तब्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरे त्यही पागलपन बहादुरीमा परिणत हुन्छ । अर्थात अरुले भन्दा फरक बाटो पहिल्याएर जिवनका फरक गन्तब्य कोरेर यात्रामा सफलता पाउनु नै बहादुरी हो । प्रसंग यसै बहादुरीको कथा सञ्जय पण्डितको । पुष लागे पछि कठ्यांग्रीने नेपालीहरुका माझकै सञ्जयले यसै महिना रुषको माउन्ट अल्ब्रुजको माइनस ६० डिग्रीको जाडोमा ६ मिनेट भन्दा बढी अर्धनग्न अबस्थामा विताएर बहादुरीको कथामा अर्को श्रृंखला थपे ।
एक पटक धाबक माउरीस ग्रीसनले भनेका थिए । यदी तिमी बाघ होउ भने हरिण भन्दा छिटो कुद होइन भने तिमी भोकै पर्छौ । तिमी हरिण हौ भने बाघ भन्दा छिटो कुद होइन भने तिमी मर्ने छौ । तिमी बाघ हौ या हरिण हौ चासो होइन । तिमी दौडनै पर्छ । दौडको यो महिमालाई सञ्जयकै बाबु तेज प्रसाद मिश्रणले अर्थथ्याए । तिमी कुद अरु भन्दा छिटो कुदे च्याम्पियन हुन्छौ । ढिलो कुदे पनि स्वास्थ्य त भइनै हाल्छौ । तेज प्रसादको यही बाणी नै सञ्जयको सफलताको कथाको सुरुवात बन्यो ।
२०६२ सम्म उनी सामान्य मान्छे थिए । उनलाई समाजमा प्रतिष्ठित बन्ने रहर थियो । स्टारडमको सपना थियो उनमा । दिपक बिस्ट, बैकुण्ड मानन्धर र राजेन्द्र भण्डारीको स्टारडमले उनलाइ तान्योक । खेलकुदमा आकर्षित भए । जावलाखेल भलीबल प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षणका लागि गए । तर मासिक तीन चार सय रुपिया फी उनले तीर्न सकेनन् । त्यस पछि भलीबल खेलाडी बन्ने चाहना छाडेर दौडन थाले ।
उनी रंगशाला पुग्न थाले । एक्लै प्रशिक्षण गर्न थाले । २०६५ मा एक पटक मकाउ जानका लागि भएको छनोट दौडमा उनी सन्तोष श्रेष्ठ भन्दा पछि परे । तर, उनले ब्यबस्थित प्रशिक्षण गरेका थिएनन् । एउटा म्याराथन कुदे १६ औ स्थानमा आए । उनको सपनाका नायक बैकुण्ठ रंगशालामा देखिन थाले । एक दिन बैकुण्ठले खासा देखि काठमाडौ कुदेको प्रसंग कोट्याएछन् । उनले सोचे ¬ह्वाट अ सोल ?ह्वाट अ हर्ट ? बैकुष्ठको बहादुरी पछि बहादुरी तर्फ उनको आखा अझ मोडीन थाल्यो ।
उनले खासाको यात्राको तयारी गरेका थिए । एक दिनखबनेपाबाट कुददै आउदा बनेपामा उनी अधययनरत कान्तीपुर भ्याली कलेजका प्रीन्सीपल जितेन्द्र मान अमात्यले देखे छन् । उनी रातको १० बजे भन्दा पछि गठ्ठाघर नाघेर आएछन् । उनी आफूलाई धेरैलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरेको बताउछन् । त्यो समयमा उनी थाकी सकेका थिए । बस भाडा थिएन। संयोयबस उनले एक खलासीलाई अनुरोध गरे । खलासीकै सहयोगमा उनी नीबास सम्म आइपुगेका थिए ।
यो सबै तयारी उनलेखास सम्म दौडमा लागी गरेका थिए । दशरथ रंगशालामा बि डीभीजन फुटबल खेल्न आउनेको भिड हुन्थ्यो । अन्य थुप्रै खेलका खेलाडी हुन्थे । आउथे जान्थे । उनी भने आफ्नै धुनमा । यी सबै मिहेनत पछि उनले २०६५ माघ १० मा काठमाडौ खासाको १२६ किलो मिटर यात्राको तय गरे र बहादुरीको श्रृंखला त्यही बाट सुरु गरे ।
उनी आप्पा शेर्पाको फ्यान । उनको बारेमा थाहा पाए पछि उनलाई लाग्यो ।संसारमम असम्भब भन्ने कही पनि छैन । उनले सगरमाथा आरोहणको तयारी गरे । सन् २०११ मा उनी हिमाल आरोहणका लागि प्रशिक्षण लिन गए । नेपाल पर्वतारोहण संघ संगकोसमन्वयमा उनले ११ महिनाको प्रशिक्षण लिए । उनी पहिलो पटक पटक सगरमाथाको आरोहण गर्न जादा ८ हजार ६ सय ५० मिटरबाट फर्केका थिए । तर, आत्तीएनन् । दोस्रो प्रयासमा सगरमाथा आरोहा पुरा गरे किलरमाउन्टेनको रुपमा परिचित ६ हजार १ सय ८९ मिटर मनास्लुको सफल आरोहण पछि उनले सबै महादेशका शिर्ष हिमाल आरोहण गर्ने योजना बनाए । यस क्रममा उनले युरोपको सर्बोच्च शिखर माउन्ट इल्ब्रुजको सफल आरोहण मात्र गरेनन् । चुचुरोको माइनस ६० डिग्री सेल्सीयसमा ६ मिनेट ३० सेकेन्ड अर्धनग्न भएर एउटा नया कीर्तिमान कायम गरे । अबको उनको लक्ष्य ८ हजार मिटर भन्दा माथिको संसारका सबै हिमाल आरोहण गर्ने रहेको छ ।